१० जना चढ्न मिल्ने यस्तो बाइक ! – Sanchar Patrika
July 6, 2020 200
तपाइलाइ याे खबर सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ– एउटा बाइकमा १० जना चढ्न मिल्छ भनेर । दुइ, तीन जनासम्म बाइकमा चेढेर यात्रा गरेको देखेका हामीलाई एक बाइकमा १० जना चढ्न मिल्छ भन्दा पत्याउन पनि गाह्रो पर्ला ।
यस बाइकमा बस्न मात्र होइन, यसमा १० जना आरामले बसेर कुदाउन सकिन्छ
यद्यपि एकसाथ १० जना बस्न सक्ने बाइक पनि प्रचलनमा छ । बस्न मात्र होइन, यसमा १० जना आरामले बसेर कुदाउन सकिन्छ । यो कुरालाई सम्भव बनाए, स्टिभ हापिन्सले । स्टिभले विश्वको सवैभन्दा पुरानो मोटरसाइल ब्रान्ड हार्ले डेभिडसन बाइकलाई आश्चर्यजनक रुप दिएका छन् । स्टिभले यस बाइकमा एक या दुइ होइन, १० सिटको प्रयोग गरेका छन् । यी १० सिटमा मानिसहरु सजिलै वसेर यात्राको मज्जा लिन सक्छन् ।
यो बाइक हार्ले डेभिडसनको ऐतिहासिक सफलता प्रदर्शन गर्नका लागि बनाइएको हो । यो बाइक लामो भएपनि सहज रुपमा सञ्चालन होस् भन्ने हेतुले यसमा कुल ७ इन्जिन प्रयोग
यो हेर्नमा पनि आकर्षक छ । यसको उत्कृष्ट इन्जिन क्षमताले पनि सवैको मन लोभ्याउन सक्छ । १० सिट भएको कारण यो बाइक तुलनात्मक रुपमा निकै लामो छ । खासगरी यो बाइक हार्ले डेभिडसनको ऐतिहासिक सफलता प्रदर्शन गर्नका लागि बनाइएको हो । यो बाइक लामो भएपनि सहज रुपमा सञ्चालन होस् भन्ने हेतुले यसमा कुल ७ इन्जिन प्रयोग गरिएको छ ।
यो बाइकमा दमदार टायर र फ्रन्ट डिस्क ब्रेक प्रयोग गरिएको छ, जसले बाइकलाई उत्कृष्ट र सन्तुलित गति प्रदान गर्छ
यसमा प्रयोग भएका सवै ७ इन्जिन चलाउन सकिन्छ । तर, लामो दुरीको यात्राका लागि यो सम्भव छैन । यदि लामो यात्रामा यी ७ इन्जिन चलायो भने त्यो तातिने खत रा रहन्छ । हार्ले डेभिडसनको यो बाइकमा दमदार टायर र फ्रन्ट डिस्क ब्रेक प्रयोग गरिएको छ, जसले बाइकलाई उत्कृष्ट र सन्तुलित गति प्रदान गर्छ । यो बाइकको निर्माण पछि स्टिभ एकदमै उत्साहित छन् ।
Prevदीपाश्री चौतर्फी आलोचित भएपछि राजेश हमाल बोले ( स्टाटस सहित )
Nextमहिला कर्मचारीमाथि ब’ला’त्कार प्रयासको आ’रो’पमा पशुपति अन्नपूर्णा आश्रमका सञ्चालक प’क्राउ
खुशीको खबर !! भोलिदेखि पठनपाठन शुरु